Nepali Society Listing
4 months ago by RKC Views: 413
‘पोर्टर’ कि ‘रिपोर्टर’ ?
1 year ago by RKC Views: 1338
काठमाडौंको एक निजी टेलिभिजनका एक पत्रकार एकै दिनमा ११ वटा औपचारिक कार्यक्रमको समाचार संकलनमा सहभागी भएछन् । साँझपख समाचार लेख्दै जाँदा ९ वटा मात्र तयार भए । २ वटा समाचार हराए । ती समाचार कुन थिए भन्ने कुरा उनले पत्ता लगाउन सकेनन् । एकैदिनमा धेरै समाचार संकलन गर्नु उनको दैनिकी, कर्तव्य वा जिम्मेवारी सबै हुने गथ्र्यो ।
1 year ago by RKC Views: 1003
थुइक्क ! आज पनि घराँ लाइन रहेनछ ! यसो काम गरौँ भनेर त्यत्रो बाटो रुझ्दै-रुझ्दै हतार-हतार गर्दै आको, धत बिद्युत प्राधिकरण ! यिनीहरुलाई पानी भए नि नहुने, नभए नि नहुने । काठमाडौंनै डुबाउला जस्तो
म आमा किन बन्ने ?
1 year ago by RKC Views: 1004
आमा बन्नु कि टेलिभिजन पत्रकार? यो प्रश्न अरुका लागि सामान्यजस्तो लाग्ला, तर टेलिभिजन पत्रकारितामा संलग्न महिलाका लागि अति नै पेचिलो र चुनौतीपूर्ण रुपमा रहेको विषय हो ।
1 year ago by RKC Views: 821
1 year ago by RKC Views: 1079
1 year ago by RKC Views: 436